Heart Museum: အမှန်တရားအတွက် ကြက်ခြေခတ်
ဘာမှ နားမလည်၊ နားလည်လဲ
ငါတို့က နားထောင်ခေါင်းညိတ် ရမှာလား
သွားစမ်းပါ ယုံတမ်းပုံပြင်တွေ ရိုးနေပြီ။
မာယာတသိန်း အပလီ အနန္တနဲ့
မင်းက ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်
Posted by Heartmuseum at 10:59 PM
Ko Oo said...
ကောင်းတယ်သူငယ်ချင်း မိုက်တယ်..။ အရေးအ သားကောင်းသလို...။ အယူအဆကိုလည်း ထောက်ခံတယ်...။
ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက် မဟုတ်တော့ဘူးလေ အစ်ကိုရ ...ဟိုကိုရောက်တော့မှာ ဒင်းကြီးတို့ အကြောင်းပြောလို့ ကတော့ တစ်နေ့ လုံးကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ပြောရတဲ့ပါစပ် သန လွန်းလို့ရေးထားတာ ကောင်းတယ်ဗျး) ကြတ်ခြေလာခတ်သွားပါတယ် ။
Yeah, understanding and reconciliation
are the best solution. Hope we get there soonnnnnnnnnnnnnn......
Inn ma tauk ta hkauk moa tar pop ta arr kg tal.
ကဗျာလေးက ကောင်းပါတယ်ဗျာ... X လေးခပ်သွားပါတယ်... ချစ်တဲ့ မြန်မာ ပြည်ကြီးအတွက်ပါ..
dontbmodest :D
Great Moods, Wonderful Rhythm, Beautiful Thoughts.
may moe ma ka said...
ငါ့စစ်တပ်ကိုငါ့ ထိန်းကျောင်း အ၀ီစိရောက်ရောက်
ကဗျာကကောင်းတယ် အားဆေးတစ်ခွက်ကို ကျမသောက်လိုက်ရသလိုပါဘဲ ခံစားမိတယ်။
ကဗျာလေးကို ခံစားသွားပါတယ်ဗျာ ...။
ဒင်းတို့ ကံဇာတာရှည်ကြာလွန်းတယ် ကိုပြတ်တိုက်ရေ ..ကျွန်မ တို့လဲ Sg ကနေ contribution လေးတွေ လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်နေကြပါတယ်။
နောက် ရက် ၆၀ တောင် ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ..
မတောက်တခေါက်ကဗျာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာကျပါတယ်။
"ငါ့လှေ ငါဖောက် ရေအောက်ရောက်ရောက်" တော့ မလုပ်လိုက်နဲ့ဦးလေ။ လှေပေါ်မှာ "ငါ" ပါနေတယ်။